Dadka waaweyn ee naafada ah (För vuxna med funktionsnedsättning)
Befintlig sida: Dadka waaweyn ee naafada ah (För vuxna m...
Halkan waxaanu ku qeexeynaa waxay baxnaanintu kuu tari karto hadaad tahay qofka naafada ah. Qoraalku wuxuu ku qoran yahay luqad fudud (lättläst).
Habilitering & Hälsa (Baxnaaninta & Caafimaadku) waxay ku siinayaan taageero iyo caawimo adiga oo ah qofka naafada ah. Waxay noqon kartaa cudurka neerfayaasha maskaxda (autism), dhaawac maskaxda ku dhacay, naafanimada garaadka, naafanimada dhaqdhaqaaqa ama dhego la'aanta iyo indho la’aanta.
Baxnaanintu waxay kuu fududaynaysaa nolol maalmeedka. Waxaad heleysaa caawimo si aad naftaada, guriga iyo bulshadaba u maarayso keligaa. Intii suurtogalka ah.
Adiga ayaa codsan kara baxnaaninta. Waxa kale oo ay noqon kartaa inuu dhakhtarka ama qof leh aqoonta cilmi nafsigu uu annaga noo soo kaa gudbiyo. Waxa ay soo qoreena ay tahay inaad u baahan tahay baxnaanin.
Marka annaga naloo soo diro gudbinta ama codsiga, waxaad heli doontaa warqad ay kuu soo direen mid ka mid ah xarumahaya qaabbilaaduhu.
Waxaan ku siin karnaa taageero waalidkaa iyo walaalahaa haddii ay u baahan yihiin inay dareemaan caafimaad wanaagsan. Waxaan sidoo kale ku siin karnaa taageero carruurtaada.
Hadaanu nahay dadka ka shaqeeya baxnaaninta waxaa na saaran waajibka sir qarinta. Taas macnaheedu nalooma oggol in aanu cid kale u sheegno arrimahaaga ama naafanimadaada.
Waxaanu ku qornaa buugga/diiwaanka caafimaadka caawimada aanu adiga ku siino. Waxaad akhrin kartaa diiwaankaaga caafimaadka bogga (1177.se) haddii kale waxaad naga codsan kartraa in aanu kuu soo qorno.
Haddii aadan ku hadlin iswiidhishka, waxaad heli kartaa turjumaan markaad nala kula kulmayso. U sheeg qofka aad kula kulmi doonto baxnaanintu haddii aad u baahan tahay.